China T-Post Shelving orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1. T-post shelving dia rafitra ara-toekarena sy azo ampiasaina, natao hitehirizana entana kely sy antonony ho an'ny fidirana amin'ny tanana amin'ny karazana fampiharana.
2. Ny singa fototra dia ahitana ny mitsangana, ny lafiny fanohanana, ny metaly tontonana, tontonana clip ary lamosina bracing.
Karazana racking: T-post talantalana
Ny takelaka metaly amin'ny talantalana T-post dia tohanan'ny clips talantalana, izay mahatonga ny fivoriambe ho mora, ary ny fanitsiana ny talantalana dia mety amin'ny filana fitehirizana tokana.
Ny singa ao amin'ny talantalana T-post dia tena tsotra, toy ny mitsangana, tohana amin'ny sisiny, tontonana metaly ary fametahana lamosina, noho izany dia lafo be izany.Ho fanampin'ny singa fototra, misy fitaovana hafa ho an'ny safidy, toy ny: sisiny harato, aoriana harato, sisiny cladding, back cladding, divider sy ny sisa.
◆Miorina amin'ny singa tsotra, T-post shelving dia singa azo antoka sy azo antoka, mifanaraka amin'ny fampiharana isan-karazany.
◆ Mifandray amin'ny takelaka vy mipetaka amin'ny tany, ny talantalana T-post dia afaka mijoro tsara.
◆Nafatony tamin'ny bracing lamosina, ny firafitry ny talantalana manontolo dia matanjaka ampy ho an'ny entana sy fitehirizana.
④Mahita tsara ny entana
Ny talantalana T-post dia natao ho rafitra misokatra.Ny tombony lehibe dia mety tsara ho an'ny tahiry voafono, manome fahitana avo ho an'ny entana tsy misy toerana fitehirizana voatondro.Izany dia mandamina ny mpandraharaha ho an'ny fahombiazan'ny habakabaka sy ny fidirana haingana.
teo aloha: Fametrahana Pallet Selective
Manaraka: Shuttle an-trano
Shuttle amin'ny lalana efatra, Drive amin'ny Racking, Baby Shuttle, Carton Live, Asrs Storage, Conveyor,